Zvinodiwa mudzidzo yevana | Bezzia
Chinodiwa mudzidzo yevana
Maria Jose Roldan | 18/06/2022 12:31 | Dzidzisai vana
Kunyange zvazvo vabereki vakawanda vangafunga zvakasiyana, zvinodiwa pakurera vana hazvikurudzirwe zvachose. Chinodiwa ndechekusvika pakati, kwete zvakanyanya kana zvishoma.
Muchinyorwa chinotevera tinojekesa kusava nechokwadi kwese kwaungave uine pamusoro pezvinodiwa mudzidzo uye nzira yekuishandisa.
1 Chii chinodiwa?
2 Ndepapi papi pacho chinodiwa chinorangarirwa kuva chakanyanyisa?
3 Makirasi evabereki zvinoenderana nezvinodiwa zvakapihwa
4 Inguva yekuchinjika mukurera
Chinokosha kune zvose kuziva nzira yekushandisa chinodikanwa chakadaro mudzidzo yevana vaduku. Kazhinji, zvinodiwa zvinogona kubatsira mwana kuita zvinhu nenzira yakakwana uye yakakodzera, asi dzimwe nguva kuda kwakadaro kunogona kuparira dzvinyiriro yakasimba pamwana inoguma yamutapura mirangariro. Ndicho chikonzero nei kuchikosha chaizvoizvo kuva pakati nepakati mune zvinodiwa uye kuwana dzidzo yakanakisisa inobvira yevana.
Ndepapi papi pacho chinodiwa chinorangarirwa kuva chakanyanyisa?
Chido chacho chakanyanyisa kana mwana amanikidzwa uye anonzwa asina kunaka nokuda kwokusaita zvinotarisirwa. Chinodiwa chacho chinofanira kuva nechinangwa chokudzidzisa mwana uye kwete kumumanikidza pamberi pechinhu chipi nechipi chaanoita. Migumisiro yekuda zvakanyanya kuvana ndeinotevera:
Kutya uye kutya kuodzwa mwoyo.
Matambudziko ehunhu nemaitiro.
Kushungurudzika uye kusagadzikana.
Matambudziko ane chekuita nevamwe vana.
kuora mwoyo mamiriro.
Makirasi evabereki zvinoenderana nezvinodiwa zvakapihwa
Kune marudzi matatu evabereki maererano nezvakawandisa zvinodiwa zvinoiswa pavana vavo:
Pakutanga vaizozivikanwa sevabereki vakaoma musoro. Iri boka revabereki rinogara richienda kuchirango uye dzakanyanya kana zvasvika padzidzo yevana vavo. Vanoshandisa kutonga kwakasimba muhupenyu hwevana vavo uye pamberi pezvikanganiso nekukanganisa vanowanzove vasingashiviriri zvachose uye vasingachinji.
Rudzi rwechipiri rwevabereki ndeavo vane tarisiro huru. Vanotarisira miuyo yakaisvonaka muvana vavo iyo dzimwe nguva inozova isingawaniki chaizvoizvo. Zvose izvi zvinoreva kuti kuvhiringidzika kwevana kwakanyanya. uye kazhinji kuita pasi pekumanikidzwa kwakanyanya.
Rudzi rwechitatu rwevabereki vane hypervigilant. Ndivo vanogaroongorora vana vavo uye vachivadzivirira zvakanyanya zvekuti vanoshaya kuzvitonga uye kuzvimiririra kana totaura nezvekuita. Kudzora kwakadaro uye kudzivirirwa zvakanyanya kunowanzova nemigumisiro yakaipa pakukura kwepfungwa kwevana.
Inguva yekuchinjika mukurera
Kana kupera kwevhiki kwasvika unofanira kuziva nzira yekumisa zvinodiwa uye kuva anochinjika zvikuru nevana.
Izvo zvinodiwa hazvikurudzirwe vana vachiri vadiki.
Kana mwana akanyanya kuoma Iwe unofanirwa kuve wakanyanya kuchinjika nemaitiro ako.
Hapana chinoitika nekuti vana vanokanganisa. Kukanganisa kwakakosha kana zvasvika pakudzidzisa vadiki.
Iwe haugone kuve wakasarudzika kana vana vari kutamba kana kunakidzwa nenguva yavo yekusununguka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Dzidzisai vana » Chinodiwa mudzidzo yevana
Mugwort: hutano hwakanaka hunobatsira